Maitiro ekuvhura iyo YouTube app zvinongedzo muChannel uye kwete muSafari | IPhone nhau
Maitiro ekuvhura iyo YouTube app zvinongedzo muChannel uye kwete muSafari
Kunyangwe kuyedza kwaMark Zuckerberg kuita iyo Facebook chikuva nzira chaiyo kune YouTube, kana iwe uchizoda kuve mumwe, iwe uchine nzira refu, refu yekufamba. YouTube, nhasi, ndiyo chete vhidhiyo chikuva patinogona tsvaga zvingangoita zvese mumavhidhiyo fomati.
Vashandisi veIOS vanogara vachishandisa Safari kutarisa Internet, kwete chete nekuda kwekuyanana kwemabhukumaki nevamwe kuburikidza neICloud, asi zvakare nekuti ndiyo bhurawuza iyo inopa kuita kwakanyanya mune Apple nharembozha ecosystem. Zvisinei, havasi vese vanoishandisa. Kana iwe ukatendeka kuGoogle uye uchingoshandisa Chrome, saka tinokuratidza maitiro ekuvhura YouTube mavhidhiyo zvakananga muChrome.
Kwangopfuura rinopfuura gore, kumwe kunyorera kunotibvumidza kugadzirisa marongero, kuitira kuti panzvimbo pekuvhura iyo default browser (Safari), yemuno tsamba yevatengi (Tsamba) kana iyo yekumusoro mepu sevhisi (Apple Mepu) tinogona kusarudza zvimwe zvinoshandiswa zvisina kubatanidzwa muApple ecosystem.
Zvese zveGoogle zvikumbiro zvinotibvumidza kuti tivagadzirire ivo chete ngatishandisei ecosystem yayo yeapplication kubva kunyorera kwako, hazvina kumbotaurwa zviri nani. YouTube haina kusara. Kana iwe uchida kuvhura YouTube zvinongedzo zvakananga muChannel, iwe unofanirwa kungotevera matanho aya.
Chekutanga pane zvese, zvine musoro unofanirwa kunge uine Chrome yakaiswa pane yako kifaa.
Tevere, isu tinovhura YouTube uye tinya pane yedu mushandisi avatar.
Tevere, tinya pane Zvirongwa. Mukati meMagadzirirwo tinya pa Zvirongwa zveGoogle zvekushandisa.
Pamusoro pechidzitiro, tinowana sarudzo Vhura bhurawuza mukati. Chekutanga pane zvese isu hatifanirwe kumisikidza bhokisi Ndibvunze kuti ndeapi maapplication ekushandisa imwe neimwe nguva, saka zvinotibvumidza isu kuseta Chrome seyakasarudzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuvhura iyo YouTube app zvinongedzo muChannel uye kwete muSafari
HomeKit inotanga kusvika kuNetamo Chishandiso chekugamuchira
Ongororo dzinongedzera kuchinjiso chikuru kune nyowani iPhone XS uye XS Max